चुनावी परिणाम नआउँदै एमाले–माओवादीबीच कलह सुरु , पार्टी एकता संकटमा ! – www.agnijwala.com
चुनावी परिणाम नआउँदै एमाले–माओवादीबीच कलह सुरु , पार्टी एकता संकटमा !
चुनावी तालमेल गरेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ दुई तिहाई बहुमत ल्याएका एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्ध चुनावको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक नहुँदै चिसिन थालेको छ ।
जसका कारण निर्वाचनपछि हुने भनिएको पार्टी एकतामा समेत आशंका बढेको छ । खास गरी दुई दलबीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पार्टी एकतापछि पार्टी नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा विवाद देखिएको छ । विवाद छरपस्ट भइनसके पनि सांकेतिक रुपमा प्रकट हुन थालेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्व एकै व्यक्तिले लिने बताइसकेका छन् । ओलीको अभिव्यक्तिबाट माओवादी झस्किएको छ ।
पार्टी वा सरकारको नेतृत्व मिलेर गर्ने सैद्धान्तिक सहमति दुई दलबीच भएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचनको मुखैमा आएर ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, राष्ट्रपतिसहित धेरै पद रहेकाले नेताहरुको व्यवस्थापन कठिन नहुने तर्क उनको थियो । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफू पार्टी नेतृत्व लिने संकेत उनले गरेका थिए ।
एमालेमा दम्भ, माओवादी चुप
चुनावी परिणाम आउँदै गर्दा एमाले वृत्तमा एक प्रकारको घमण्ड देखिएको छ । एमालेका एकथरि नेता, कार्यकर्तादेखि मतदातासम्म माओवादी केन्द्रसँगको चुनावी तालमेल पार्टीका लागि हित नभएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । ‘एक्लै चुनाव लडेको भए एमालेको बहुमत आउने रहेछ । चुनावी तालमेलका कारण माओवादीलाई जिताउनुपर्दा नोक्सान भयो’, चिया पसलदेखि सार्वजनिक सवारी साधन र नेता कार्यकर्ताको जमघटमा एमाले वृत्तबाट यस्तो टिप्पणी सुन्न थालिएको छ । तर, माओवादी नेतृत्व भने चुपचाप बसेको छ ।
बामदेव–नारायणकाजी पराजयले वातावरण धमिलो
एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र माओवादी वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ बाम गठबन्धनका प्रमुख सूत्राधार हुन् । प्रतिनिधिसमा निर्वाचनमा दुवै सूत्राधार पराजित भए । गौतम बर्दिया क्षेत्र नम्बर– १ बाट कांग्रेस उम्मेदवार सञ्जय गौतमसँग ७ सय ५३ मतको झिनो अन्तरमा पराजित भए । श्रेष्ठलाई गोरखा–२ बाट नयाँ शक्ति संयोजक बाबुराम भट्टराईले हराए । पार्टी एकताका लागि मनैदेखि सक्रिय भएका दुई नेता नै चुनाव हार्दा पार्टीभित्रको निर्णयमा उनीहरु कमजोर हुने भएका छन् । निर्वाचन जितेको अवस्थामा उनीहरुले प्रमुख नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्थे ।informusиталиюcrane stockпродвижениеnew year in st petersburg russiaредизайн сайта цена